काठमाडौँ । असोज २५ मा राजधानी काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) र ने.क.पा. (संयुक्त) बीच पार्टी एकता सम्पन्न भयो । त्यो असोज १७ मा नयाँ शक्ति सहित एमाले र